Xeerka kufsiga ee Somaliland waa xeer noocee ah? – Kaasho Maanka
Madaxwanaha Somaliland oo qalinka ku duugaya xeerka kufsiga
Waxaan arkay dad badan oo ka qaylinaya xeerka kufsiga ee ay ansixiyeen golayaasha xeer dejinta Soomaalilaan, madaxawaynuhuna uu saxiixay. (Xeer. Lr 78/2018) Xeerkaas cid waliba waa ka hadashay mid akhriyey iyo mid aan akhriyinba. Koox waliba waa qaylisay sabab la’aan iyo jaahlinmo darteed. Xeerkaas waxaa diidey qolyaha diinta ka ganacsada ee culimada sheegta oo aan ogolayn in la keeno xeer ama sharci ka mamnuucaya kufsiga ay kufsadaan ubadka aan qaan gaadhka ahayn. Waxa kale oo iyana diidey kuwa raba inay wax kufsadaan ama ubadkooda uga baqaya inay denbigaas ku dhacaan oo ciqaab adag mutaan. Waxaa kaloo jira qayb saddexaad oo iyaguna iska dhex socda oo aan ujeedo lahayn.
Xeerkaas aniga siday ila tahay ma jirto wax qiime ah oo uu leeyahay sababtoo ah wuxuu siyaabo badan u dhiirrigelineyaa kufsiga. Si xaqiiqda ku qotontana uma qeexayo kufsiga iyo waxa uu yahay.
Qodobka 4aad ee xeerkaasi wuxuu ku qeexay kufsi; “Qof kasta oo kula kaca qof kale galmo aan sharci ahayn isagoo adeegsaneya xoog, qasab, iyo hanjabaad“. Sidoo kale isla qodobka afraad farqadiisa (T) waxay leedahay; “Kufsi waxaa weeye qof kasta oo kula kaca galmo aan sharcigu bannayn qof kale oo aan awoodin bixinta raalli ahaansho“.
Xeerkaasi sida ku cad gaar ahaan qodobkiisa afraad, wuxuu kufsi ku qeexay fal galmo aan sharci ahayn oo loo maray ama lagu helay kadib markii la adeegsadey xoog iyo hanjabaad. Galmada aan sharciga ahayni hadaba maxay tahay? Galmada aan sharciga ahayn waxaan u qaadanaynaa in looga jeedo Sino (الزنى). Sinada lafteeda ayaa qeexid u baahan. Sino waxaan ku qeexi karnaa laba qof oo heshiis ku ah raallina iskaga ah inay raaxaystaan kuna raaxaystaan meel iyaga mooye aanay cid kale ogeyn.
QORMO LA XIRIIRTA: Narcissism-ka Bulshooyinka Musliiminta
Kufsigu maaha sida uu xeerkaasi u qeexay. Kufsigu waxaa weeye galmo qof lagu sameeyey isagoo aan raalli ka ahayn ama aan ogolaansho bixin karin iyadoo la adeegsaneyo awood, hanjabaad, iyo xeelad. Galmadaasi ha ahaato mid sharci ama yaanay ahaan.
Hadii aan raacno qeexidda xeerkan ninku wuu qasbi karaa xoogna waa ugu galmoon karaa xaaskiisa maadaama ay tahay galmo sharcigu banneeyey. Hadii ninka loo ogol yahay inuu xaaskiisa kufsan karo maxay tahay sababta loo sameeyey xeerka kufsiga? Hadii aanay raali ka ahayn naagtu in ninkeedu u galmoodo saw kufsi maaha?
Galmadu waxay kufsi noqotaa sida aan kor kusoo sheegay marka loo maro waddo xun iyadoo la adeegsaneyo awood, xeelad iyo hanjabaad. Adeegsiga awood, hanjabaad iyo xeelad waxay imanaysaa oo keliya marka ay meesha ka baxdo raalli ahaanshaha dhinac ka mid ah labada dhinac.
Xeerkaasi ma qeexeyo qaybta eray bixintana kuma jirto waxa looga jeedo ereyga (qof kasta) mana qeexin xaaladaha lagu geli karo fal denbiyeedkaa. Dumarku miyaanay kufsi samayn karin? Hadiise qof sakhraansan maandooriye uu isticmaalay kadib xubintiisa taranka tusa caruur aan qaan gaadh ahayn maxay tahay ciqaabta lagu qaadayaa? Si qofka loogu ciqaabo fal denbiyeed uu geystey waa in la soo cadeeyo inuu si ku talo gal ah (intentionally) welibana maankiisa iyo miyirkiisa isagoo qaba qofkaasi ku kacay denbigaas. Haddii intaas la caddayn waayo qofkaasi denbiile maaha.
Waxaa iyana muhiim inaan ogaanno in kiisaska kufsiga ah ee ka dhaca Soomaalilaan aan loo geysan haweenka oo qudha, isla markaana aanay gaysan ragga oo keliya. Kufsigu waa denbi loo gaysan karo wiilasha yar yar, hablaha yar yar iyo kuwooda qaan gaadhka ahba. waana denbi ay geysan karaan ragga iyo dumarkuba.
QORMO LA XIRIIRTA: Dhaqan Doorin
Waa in aan qirno in shareecada islaamka aanay meelna kaga jirin xeer ama nas ku saabsan denibga kufsiga. Kufsigu maaha galmo raali la iskaga yahay (الزنى).
Waxaa iyana lama huraan ah in aan ogaanno in diinta islaamka aanay meelna kaga jirin aayad ama xadiis qeexeya una sheegeya si cad da’ cayiman oo lagu qaan gaadho. sidaa darteed dawladda meesha ka talisa waxay odhan kartaa da’da lagu qaan gaadho waa 20. Kadib marka dawladu qaadato oo ansixiso faafinta rasmiga ah ee dawladaasna lagu soo saaro xeer qeexeya da’da lagu qaan gaadheyo waxaa denbi iyo kufsi noqonaya guurka caruurta ka yar da’da xeerkaasi sheegay.
Kuwa ku doodeya awoodda xeer dejinta waxaa iska leh Illaahay, waxaan leeyahay Jaalayaal waxaa jira waxyaabo Illaahay iyo Maxamed ilaaween, ama aanay garanayn oo aanay ka hadlin, amba ay uga aamuseen si ku talo gal ah. Waxaa jira waxyaabo badan oo innaga la inooga baahan inaan sharci u samaysanno sida xeerarka waddo marista, xeerka caafimaadka, xeerka denbiyada lagu galo tiknoolajiyadda. Wax badan oo jirey qarnigii todobaad maanta ma jiraan, sidoo kale waxyaabo badan oo aan waagaa jirin ayaa maanta jira. Maxamed Dameer, Faras, iyo Awr buu raaci jirey, halka maanta gaadhi, tareen, iyo diyaarad aan raacno. Isku xeerna ma noqon karaan geela iyo tareenadu.
Dumarka kufsi Soomaali